Spotify inosvika pamamirioni makumi masere nematatu vanyoreri uye vatove nevashandisi vane mamirioni zana nesere Ndinobva mac
Mune yaro Q2018 83 mhindu mushumo yakagovaniswa nezuro, yechipiri kubva pakumisikidza kwekutanga kupa veruzhinji, Spotify yakaratidza kuti yakura kusvika pamamirioni makumi masere nematatu vanyoreri pasi rese uye vanosvika mamirioni zana nemakumi masere nevashandisi. Midziyo yemwedzi (kusanganisira yemahara tier) pakupera kwaJune. 180. Uku ndiko kuwedzera kubva kune makumi manomwe emamiriyoni ekubhadhara vanyoreri uye nemamirioni 2018 vashandisi vese iyo Spotify Ini ndaive nekota yekutanga ye2018.
Spotify yakura nekukurumidza munzvimbo dzekupedzisira. Kunyangwe Spotify ichiri neanopfuura zvakapetwa kaviri nhamba yevanobhadharira pasi rese (Apple Music yakagumisirwa pamamirioni makumi mana), mishumo ichangoburwa inoratidza kuti sevhisi yeApple yekufambisa inogona kupfuura Spotify maererano neanyoreri kubhadhara muUnited States.
Spotify haana kudoma nhamba dzevanobhadhara kunyoresa muUnited States, asi anodaro 31 muzana yeavo 180 mamirioni evashandisi vanoshanda pamwedzi vari muNorth America. Izvi zvinosvika mazana mashanu emamirioni akabhadharwa uye emahara Spotify vashandisi mumatunhu ese, kusanganisira United States, Canada neMexico. Spotify inoratidza kukura kwayo kwekunyorera kune yayo yakasimba kuita uye yakaderera mutengi churn mwero kubva kune yayo Family Chirongwa, pamwe nekudyidzana senge Spotify + Hulu package.
Iyo kambani yakataurawo kune mitsva yeGDPR mitemo yakagadzwa muEurope muna Chivabvu apfuura se'kuvhiringidza 'mumisika yayo yeEurope mukati mekota yechipiri. Mitemo yainzi yaive nayo kukura kwevanyori kunonoka, uko 37 muzana yeavo ese mushandisi base inogara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Spotify inosvika pamamirioni makumi masere nematatu vanyoreri uye vatove nevashandisi mamirioni zana nemakumi masere